Halka laga keeney Turkey iyo meesha loo wado Sacuudi - Caasimada Online
Home Maqaalo Halka laga keeney Turkey iyo meesha loo wado Sacuudi
Halka laga keeney Turkey iyo meesha loo wado Sacuudi
By Abdirahman Mohamed Aden
Mahad dhamaanteed alle ayay u sugnaatay, nabigeena suuban nah naxariis iyo nabadgalyo korkiisa ha ahaato. Maqaalkan waxa aan uga hadlayaa Isbadalo Kasocda qaar kamid ah wadamada islaamka, gaar ahaan Labbo wadan oo Kamid ah wadamada ugu Tunka weyn wadamada islaamka waaana:….
Xogtaan waxa ay ku koobnaan doontaa qarnigii tagay iyo kan lagu jiro oo kaliya, waxaana is dul taagi doonaa wadan waliba suu ahaa anigoo isbadaladaas kusaleynaya qoddobada soosocda.
Awoodii ay ku naaloonaysay Turkigu waxa ay daciiftay bilowgii Qarnigii 18aad.
Kolkaas gaaladu waxa ay isku deydey iney inqilaabto Turkiga, weyna inqilaabtay.
Wakhtigu waxa uu is guraba waxaa dhacday doorashadii laga qorshaynayay wadankaas waxaana kusoo baxay codayntii cadnaan, waxa uuna ku guuleysatay majaro u qabashada dalkaas.
Shacabka Turkigu waxay kujireen nolol adag waxeyna u heelanaayeen qof mar qura ka sheekeeya islaamka.
Cadnaan guushiisii kadib waxa uu shacabkiisa usheegey, hadii ay dhalato bisha ramadaan in lagaga adimi doono af carabiga gabi ahaan masaajida dalkaas.
shacabkiisu waxay aad ugu riyaaqen arinkaas halka ay aad uga xumaadeen reer galbeedku, maadama uu ka xuub siibtay dal ay kusoo tababareen cilmaaniyada.
Aan inyar kasii ifiyo Turkiga uu maanta hoggaanka u hayo madexweyne Erdogan, waxaa aad looga dheehdaa inuu yahay shakhsi kufaana islaanimadiisa kaas dalkiisa iyo dadkiisaba Diin jaceyl ku haga.
Waxaa tusaale nool ah wakhti xaadirkan Madxafka caanka ah ee Hagia Sophia oo ku yaal magaalada Istanbul in markale loo bedalay masjid, kadib go’aan uu gaaray Madaxweyne Recep Tayyip Erdogan.
Sacuudi Carabiya ayaa ah gobolka ugu weyn ee madaxbannaan Bariga Dhexe, kaas oo juqraafi ahaana ah gobolka shanaad ee ugu weyn Asia tan labaad ee dunida Carabta ka dib Algeria iyo 12aad ee adduunka ugu weyn.
Sacuudi Carabiya ayaa xuddun u ah Jordan iyo Ciraaq waqooyi, Kuwait ilaa waqooyi bari, Qadar, Bahrain iyo Imaaraadka Imaaraadka Carabta xagga bari, Oman ilaa koonfur iyo yemen xagga koonfureed.
Waxaa laga soocay Israel iyo Masar Gacanka Cadanba, waana waddanka keliya ee leh xeebta Badda Cas iyo xeebta Gacanka oo badi dhulkeedu wuxuu ka kooban yahay lamadegaan, dhul hoose iyo buuro.
Sidoo kale waa wadan ay kuyaalaan goobo nagu weyn hadaan nahay dad ku abtirsada islaamka, waxaa kuyaala Xarameynkii.
Aynu u daadagno gunta digaalkeena iyo dhulka la isku yiraahdo sacuudi carabiya.
Sababtoo ah wakhti xaadirkan uu yimid wiilka dhaxal sugaha ah ee Mohamed binu salmaan, waxa uu la soo baxay dagaal uu kuhayo kudhaqankii shareecada islaamka.
In ay dowladiisu ku dadaaleyso In wadanka laga dhigo wadan loo soodalxiis tago, taas oo saamayn tabab yeelan karta.
In qadiyadihii Islaamka ee guud aad moodid inuu ka xuubsiibanayo sacuudiga, xitaa laga cabsi qabo inuu afku is dhalan rogo.
Ugu danbayn Ujeedadeydu waxa ay ahayd inaan isla aragno halka Turkiga laga keeney iyo halka loowado, sido kale halka Sucuudigu joogi jirey iyo halka loowado.
Waxaan idin ku dhex xusuusin dhigaalkan in lagu jiro xilli adag, waxaa muhiim ah inaan diinteena gows dambeedka ku qabsano oo kudhaqankeedana kudadaalno.
Abdirahman Mohamed Aden – Waxaad kala xiriiri kartaa Jaaburi999@gmail.com